नाटक : महापात्र - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← नाटक : राष्ट्रिय रुने कविगोष्ठी
लघु कथा : अमृतमय धारा बहिरह्यो →
नाटक : महापात्र
~कृष्ण शाह “यात्री”~
रङ्गमञ्चको मध्यभागमा एउटा विशाल क्यानभास देखिन्छ । क्यानभासमा पुस्तकको अर्धअमूर्त चित्र देखिन्छ । मञ्चको दायाँखण्डको अघिल्तिर कुर्सी , टेबल, कपी, किताब, कलम, टेबल ल्याम्प, डस्टविन, पानी भरिएको जग अदि सामग्रीहरू राखिएका छन् । अर्को कुनामा पुरानो दराज, सोफासेट, कम्प्युटरका साथै भित्तामा क्यालेन्डर, केही सम्मानपत्रहरू झुन्ड्याइएका छन् ।
मञ्चमा यतिञ्जेल मधुरो प्रकाश छरिएको हुन्छ । कुर्सीमा एकजना लेखक निरन्तर केही लेखिरहेका हुन्छ । नेपथ्यमा एकोहोरो बाँसुरीको धून ? रोदन) सुनिन्छ ।
मञ्चका विभिन्न भागमा लेखकका सिर्जनाका प्रतिकका रूपमा विभिन्न पात्रहरू ( मानव आकृतिहरू) अस्तव्यस्त रूपमा कालो, सेतो, रातो, पहेंलो कपडाले छोपिएका अवस्थामा छन् ।
प्रकाश लेखकमा केन्द्रित हुन्छ । लेखक चश्मा फुकाल्छ र त्यसलाई पुछेर फेरी लगाउँदै लेख्न थाल्छ । उसलाई आफूले लेखेको कुरा चित्त बुझ्दैन र लेखेजति मुठि्ठमा कच्याककुचुक पारेर ‘डस्टविन’मा फाल्छ ।
लेखक उठ्छ चश्मा फुकालेर एकपटक क्यानभासलाई हेर्छ र चश्मा लगाउँदै क्यानभासलाई नजिक गई नियाल्छ । लेखकको अनुहारमा अन्योलताको भाव स्पष्ट देखिन्छ । यसपछि ऊ क्यानभासबाट टाढिदै वरिपरि छरिएका आफ्ना सिर्जनाका पात्रहरूलाई, पुस्तकहरूलाई र आफूलाई समेत हेर्छ । हतास मनस्थितीमा लेखक मञ्चको अग्रभागमा आउँछ । हतारिदै कुर्सीमा बसेर केही लेख्न थाल्छ र लेखिसकेपछि त्यो पढ्छ । चित्त नबुझेर च्यात्छ ।
लेखक : आज मैले किन मेरो उपन्यासको अन्तिम पृष्ठ टुङ्ग्याउन सकिरहेको छैन ? के भयो मलाई ? यस्तो विचलन त यसअघि मभित्र कहिल्यै पनि देखिएको थिएन । किन पात्रहरूलाई मैले चाहे जसरी अन्त्य गर्न सकिरहेको छैन ? यस बारेमा मैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्छ र जसरी भए पनि यसलाई आजै निकास दिनै पर्छ ।
लेखक जगको पानी पिउँछ । केही राहतको अनुभूति गर्छ अनि शान्त भई ध्यानमग्न मुद्रामा सोच्न थाल्छ । सोच्दासोच्दै लेखक कुर्सीमा नै निदाउँछ ।
नेपथ्यमा एकोहोरो आलाप सुनिन्छ ।
आलापसँगै मञ्चको दाँया- वाँया खण्डमा रहेका पात्रहरू मध्ये कालो र रातो रङका कपडाले छोपिएका पात्रहरू चलमलाउन थाल्छन् । उनीहरू छोपिएका कपडा निकाल्छन् र दुवै हातमा कपडा फैलाउँदै तन्द्रामा रहेका लेखकलाई त्यही कपडाले छोप्नका लागि विभिन्न हाउभाऊ गर्दै अगाडि बढ्न थाल्छन् । लेखक आफ्नै सुरमा उँघिरहेका हुन्छन् ।
पात्रहरूले लेखकलाई कपडाले पालैपालो छोप्न खोज्दै आफूतिर तान्न खोज्छन् । लेखक तानिदैन । उनीहरूले पुनः कोशिश गर्छन् तर सफल हुँ दैनन् । लेखकलाई अप्ठ्यारो महसुस भएपछि तन्द्राबाट व्युझिन्छ । यसपछि भने पात्रहरू दु्रत गतिमा पछाडि हट्छन् र क्यानभासको पछाडि गई अदृश्य हुन्छन् ।
लेखक : (जुरूक्क उठेर चारैतिर खोज्दै) खै ! कहाँ गयो त्यो ? त्यो पात्र यतै कतै हेर्नुपर्छ । ( खोज्दै) कता गयो त्यो ? ( पात्रलाई सुनाउँदै) ए ! पात्र सुन्दैछस् तँ मेरो कुरा ? तँ मेरो नयाँ सिर्जनाको प्रमुख पात्र होस् । तँ यसरी एक्कासी मेरो मानसपटलबाट निस्किएर मलाई नै सताउन पाउँदैनस् । मेरो साधनाको क्रममा यसरी अनावश्यक रूपमा बारम्बार तैंले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनस् । (अर्को दिशामा जाँदै अझै ठूलो स्वरले पात्रलाई सुनाउँदै) ए पात्र सुन् ! लेखकसँग पात्रले कदापी जोरी खोज्न मिल्दैन । मेरो काममा हस्तक्षेप गर्ने वा बाधा पुर्याउने दुस्प्रयास नगर । नत्र म मेरो कृतिमा तेरो कठोर मृत्यु गराउनेछु । सुन्दैछस् मेरो कुरा !
लेखक विक्षिप्त झै देखिन्छन् । उनको कुरा सुनेर लेखक पत्नी भावना हतारिदै कोठामा प्रवेश गर्छिन् ।
भावना : (लोग्नेलाई देखेर) हैन ! के भयो ? किन यसरी ठूलो ? ठूलो स्वरले चिच्याएको ? (चारैतिर हेर्दै ) कोसँग फेरि झगडा पर्यो ? (चारैतिर हेर्दै ) खै ? म त यहाँ अर्को कोही मान्छे पनि देख्दिन । कोसँग कुरा गरेको ? कि विपनामा पनि एक्लै बर्बराउन थाल्नु भयो ?
लेखक 🙁 रिसाउँदै) नकरा तँ । तँ अहिले मेरो कुरा बुझ्दैनस् भावना ! (दृढताका साथ) म एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कृतिको सिर्जनाको अन्तिम चरणमा छु । यो बेला मेरो कुरा जोसँग पनि हुन सक्छ । यो मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कृति हो । अहिले म यो जन्माउँदाको प्रश्रव वेदनामा छु । तँ यो कुरा बुझ्दैनस् । तँ यहाबाट गइहाल ।
भावना : यो के नै नौलो कुरा भयो र ? तपाई राम्रो सिर्जना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म मान्दछु । तपाईमा अक्षर बुन्ने अद्भुत चमत्कार छ भन्ने कुरा पनि म जान्दछु । तर यसरी एक्लै कोठामा बसेर बर्बराउनु चाहि ठिक होईन । यो चाहि राम्रो लक्षण होइन है, भनिदिएकी छु ।
लेखक : (आवेगमा) तँ के भन्न चाहन्छस् ? … भावना ! म बहुलाउन लागें ? म पागल हुन लागें ? ( दृढताका साथ) यो तेरो संकिर्ण मानसिकताको उपज हो । बुझिस् ? साधनाको उत्कर्षमा पुगेका लेखकलाई अबुझहरू यस्तो पीडा दिन्छन् भन्ने थाहा छ मलाई । त्यसैले म तँसँग अहिले विवाद गरेर र्व्यर्थमा समय खेर फाल्न चाहन्न । तँ खुरुक्क बाहिर जा त ।
भावना : ( रिसाउँदै) तपाइले भन्न खोजेको के ? के तपाइलाई अलिकति पनि लाज? सरम लाग्दैन ? आफ्ना साधना भनेर तपाइ व्यवहारिक जीवनबाट उम्कन खोज्नुहुन्छ ? के लेखकको जिम्मेवारी पात्रहरू जन्माउनु मात्र हो । उसले आफूले जन्माएका पात्रहरूको भविष्यको ख्याल गर्नु पर्दैन ।
लेखक : (शान्त हुँ दै) ओहो ! तैंले त निकै गहन कुरा पो गरिस् । के तँ लाइ मेरो नयाँ उपन्यासका पात्रहरूबारे यत्तिका धेरै चासो छ ?
भावना : मैले तपाइको उपन्यासका पात्रहरूको बारेमा कुरा गरेकी हैन । मैले तपाइको घरभित्रका अन्य पात्रहरूको कुरा गरेकी । छोराछोरी कलेज पढ्ने भइसके । तपाइलाई उनीहरूको भविष्यको पटक्कै ख्याल छैन । छोरी सिर्जना अब ‘प्लस टु’ सकेर मेडिसिन पढ्न बैङ्गलोर जाने कुरा गर्दैथिई । के उसको पढाइका लागि चाहिने खर्चको रत्तीभर पनि पीर? चिन्ता छैन तपाइलाई ?
लेखक : (निहुँ खोज्दै) ल भयो । म यो कुरामा अहिले बहस गर्न चाहन्न । अहिले म मेरो उपन्यासको अन्तिम पृष्ठ टुङ्ग्याउने क्रममा छु । मैले यो आज जसरी भए पनि सिध्याउनै पर्छ । (सम्झाउँदै) एउटा सिर्जना जन्माउन कत्तिको कठिन हुन्छ भन्ने कुरा तँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ भावना ! त्यसैले सुन् यो बेला मलाई एकान्तको खा“चो छ । मलाई यसरी बारम्बार ‘डिर्स्र्टब’ गर्न आएको मन पर्दैन । अहिले तँ जा !
भावना : तपाइलाई सधैं आफ्नो इच्छाको मात्र मतलब छ हैन ? के यो घरमा तपाइ बाहेक अरू पनि बस्छन् भन्ने कुराको पटक्कै ख्याल छैन ? हे इश्वर ! मैले यो जुनीमा यो घरमा बसेर कहिल्यै सुखको सास फर्ेन नपाउने भएँ । मेरो कर्मै उस्तो ….
लेखक : ( कुरा काट्दै) भयो, भयो जा, धेरै भाषण नछाँट । अहिले म तँ सँग कुनै पनि तर्क? वितर्क गर्ने मुडमा छैन ।
भावना : यस्तासँग के कुरा गर्नु ? मान्छे भए पो …? आदिम युगको लेखकसँग तर्क गर्नु नै बेकार छ ।
भावना रिसाउँदै बाहिरिन्छ ।
लेखक शंकालु नजरले पत्नी गएतिर हेर्छ र हतार हतार ढोका लगाउँछ ।
लेखक : (लामो सास फेर्दै ) बल्ल गई ! … यसले पनि अचेल अनावश्यक रूपमा मेरो कार्यमा हस्तक्षेप गर्न थालेकी छे । यीनीहरूले मेरो महत्व अझै बुझ्न सकेका छैनन् । ….अहँ ! यस्ता झिना मसिना कुरामा म अलमलिनु हुदैन । अहिले मैले मेरो अधुरो सिर्जना पुरा गर्नु पर्छ ।
नेपथ्यमा आलाप सुनिन्छ ।
लेखक हतार हतार केहि लेखेजस्तो गर्छ । लेखेको कुरा पढेजस्तो गर्छ । चित्त नबुझेर फेरि च्यात्छ ।
मञ्चको मध्य भागमा रहेको क्यानभासलार्य नियालेर हेर्छ र पुनः कुर्सीमा बस्छ ।
लेखक : आज किन यस्तो भइरहेको छ ? मैले किन सोचेजस्तो लेख्न सकिरहेको छैन ? मेरो सिर्जनाको अन्तिम पृष्ठलाई किन मैले पुरा गर्न सकिरहेको छैन ? अहँ मैले शान्त दिमागले सोच्नु पर्छ ।
लेखक ध्यानमग्न हुन्छ । नेपथ्यमा आलाप सुनिन्छ ।
मञ्चको पछाडिबाट पात्र-१ देखा पर्छ । उसले लेखकलाई नियालेर हेर्छ ।
लेखक आफ्नै तालमा ध्यानमग्न हुन्छ । लेखकलाई देखेर युवक जोडले हाँ स्न थाल्छ । हाँ सो सुनेर लेखक झस्कन्छ ।
लेखक : को ? को हो यसरी हाँस्ने ?
पात्र १ : म हुँ म ।
लेखक : को म भन्ने ?
पात्र १ : तैंले त मलाई राम्रोसँग चिन्नु पर्ने हो ? मलाई तैंले चिनिनस् ?
लेखक : वाहियात कुरा नगर । खुरूक्क भन् तँ यो बन्द कोठामा कसरी आइस् ? (नजिक जाँदै) तँ लाई मैले यसअघि कतै देखेको हुनु पर्छ ! तर कहाँ हो ? अहँ ठम्याउन सकिन ।
पात्र १ : त्यसो भए तैंले आफ्नो सिर्जनाको प्रमुख पात्रलाई पनि चिन्न सकिनस् ?
लेखक : (शंका) प्रमुख पात्र ? (नियालेर हेर्दै ) कतैं तँ … ?
पात्र १ : मलाइ राम्रोसँग हेर । … म तेरो उपन्यासको मुख्य पात्र नै हुँ ।
लेखक : ओहो ? तेरो अनुहार त मेरो उपन्यासको मुल पात्रसँग काटिकुटि मिल्छ नि । कतै तँ ‘जसमान नेपाली’ त होइनस् ?
पात्र १ : तँ लाई अझै पनि आफ्नो सिर्जनामा विश्वास छैन भने के लेख्छन् ? लेख्न छाडिदे ।
लेखक : ( रिसाउँदै) धेरै जान्ने नहो जसे ! तैले लेख् भन्दा लेख्ने र नलेख् भन्दा लेख्न छाडने बतासे लेखक हैन म । म आफ्नो लागि लेख्छु । मलाई जे मन लाग्छ त्यही लेख्छु । म लेखक हुँ । तँ जस्तो पात्र होइन । मेरो भुमिका के हो भन्ने कुरा तैंले मलाई सम्झाइरहन पर्दैन ।
पात्र १ : गलत ! अब लेखकले आफू खुशी लेख्ने दिनहरू गए । स्रष्टाले आफू खुशी चरित्रहरूलाई प्रयोग गर्ने दिन सकिए ।
लेखक : हावादारी कुरा नगर । मैले साहित्य सिर्जना गर्न थालेको पाँच दशक नाघिसक्यो । यस अन्तरालमा आजसम्म मेरा सिर्जनाका कुनै पात्रहरूले पनि मसँग गुनासो गर्न आएका छैनन् । मैले जन्माएका कतिपय पात्रहरू पाठकहरूको मष्तिष्कमा अमर भएर बा“चेका छन् । मैले लेखेका पात्रहरू रङ्गमञ्च र का“चका पर्दाहरूमा जीवन्त भएका छन् ।
पात्र १ : होला । तैले तेरो सामन्ती सोचका उपजस्वरूप जन्माएका घरानिया पात्रहरू, रक्सीको नशामा उब्जाएका विकृत पात्रहरू तेरो कृतिका निम्ति चुपचाप दास बने होलान् । त्यही चरित्रहरूलाई भर्याङ बनाएर तैंले बर्षौंसम्म हजारौं नजरलाई धोका दिन पनि सफल भइस् होला । तर तेरो मनोमानीका दिनहरू सकिए अब । मलाई तैंले आफूखुशी प्रयोग गर्न पाउँदैन् ।
लेखक : मैले जन्माएको चरित्र भएर मेरै अगाडि तँ नाथेले यस्तो ठूला कुरा गरेको सुहाउँदैन जसमान नेपाली !
पात्र १ : धेरै ठूलो कुरा गर्न तैंले पनि सुहाउँदैन । तँलाई मेरो चरित्रको बारेमा अरू के थाहा छ भन् त ?
लेखक : तँ द्वन्द्वको चपेटामा मारिएको एउटा नेपाली होस् । योभन्दा धेरै जान्न आवश्यक छैन मलाई ।
पात्र १ : तँ यतिका दाबीसाथ मेरो जीवनको बारेमा सबै कुरा तेरो कृतिमा कसरी अभिव्यक्त गर्न सक्छस् ? मेरो अन्त्य आफूखुशी गर्ने तेरो हैसियत के छ ?
लेखक : मैले धेरै अध्ययन गरेको छु । मेरा लेखनका पूर्वअनुभवले पनि तेरो बारेमा म अलिकत्ति पनि नहिच्छिचाइकन जस्तोसुकै निर्णय पनि सक्छु ।
पात्र १ : यसमा मेरो घोर आपत्ती छ । तैंले केवल कल्पनाको आधारमा तेरो कृतिमा मेरो आफूखुशी अन्त्य गर्न पाउँदैनस् । तँलाई थाहा छ ? मैले यो देशका निम्ति किन रगत बगाएँ ? के तैले मेरा अधुरा सपनाहरूलाई तेरो उपन्यासमा सम्बोधन गरेको छस् ?
लेखक : ती कुराहरू मेरो उपन्यासमा आवश्यक थिएन । मैले त तेरो र सुन्तली बीचको प्रेमको कथानक पक्षलाई मात्र समेट्न खोजेको छु । तिमीहरू दुईको प्रेम र विछोडका कुराहरूलाई मैले स्वैरकल्पनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छु ।
पात्र १ : ( रिसाउँदै) मैले मेरो जीवन उर्त्र्सग गरेको घटनामा मेरो प्रेमसम्बन्धले ठूलो अर्थ राख्दछ कि मेरा सपनाहरूले ? यो कुरा पनि छुट्याउन नसक्नेले यो सिर्जनाको आफूखुशी अन्त्य गर्न पाउँदैन । यदि यस्तै चाला हो भने तिमी आफ्नै पात्रहरूबाट बहिस्कारमा पर्नेछौ ।
नेपथ्यमा कसैले ढोका ‘ढकढक’ गरेको आवाज सुनिन्छ ।
लेखक र्सतर्क हुन्छ ।
लेखक : ए ! को हँ ?
सिर्जना : ( बाहिरबाटै) म सिर्जना हुँ बाबा !
लेखक : (भित्रबाटै) सिर्जना ! किन के काम पर्यो छोरी ?
सिर्जना : (बाहिरबाटै) एकछिन् ढोका खोल्नुस् न भन्या !
लेखक : (भित्रबाटै) छोरी सिर्जना ! म अहिले नयाँ सिर्जनाको साधनामा छु । कुनै जरूरी काम छ कि ? त्यसै मलाई बाधा पुर्याउन आएकी ?
सिर्जना : बाबा ! तपाइलाई कफी बनाएर ल्याएकी छु । खान मन छैन भने फर्काएर लैजाऊ ?
लेखक : (एत्साहित हुँ दै) ए पर्ख ! पर्ख !
लेखकले हतार हतार ढोका खोल्छ ।
कोठामा सिर्जनाको प्रवेश हुन्छ ।
सिर्जना : (कफी दिदै) लिनोस् !
लेखक : थ्याङ्क यू छोरी ! अनि तिमी आज स्कूल गइनौं ?
सिर्जना : जान्छु बाबा ! तर हिजो हजुरले मलाई दिन चार वटा नयाँ सायरी लेखिदिने कुरा गर्नुभएको थियो नि ! त्यो मैले भोली स्कूलको कार्यक्रममा सुनाउनु पर्छ । खै ल्याउनुहोस् त ।
लेखक : कहाँ अब गहन सिर्जनामा लागेको साधकलाई शायरीमा अल्मलाउन खोजेकी ?
सिर्जना : नाई हुन्न के ! हिजो चाहि दिन्छु भन्ने । आज चाहि कुरा फोर्ने ? म त शायरी नलिइ एक जान्न, दुई जान्न, तीन जान्न !
सिर्जना रिसाउँदै नजिकैको कुर्सीमा बस्छिन् ।
लेखक अप्ठेरोमा पर्दे समाधान सोच्न खथाल्छन ।
लेखक : छोरी सिर्जना ! यति सानो कुरामा पनि रिसाउने हो त ? तिमी त संसारकी सबैभन्दा ज्ञानी छोरी । … पहिला मेरो कुरा त राम्ररी सुन ! म अहिले एउटा महान सिर्जनामा लागेको छु । तिम्रो शायरी भरेसम्ममा दिउँला हुन्न ?
सिर्जना : (अनुहारमा थोरै हाँ सो) साँच्ची हो ? प्रोमिस !
लेखक : प्रोमिस !
सिर्जना : बाबा ! एउटा कुरा भनौं ? हजुर यसरी रातदिन एक्लै कोठामा बसेर कसरी लेख्नसक्नु हुन्छ ? के सबै लेखकहरू यस्तै हुन्छन् बाबा ? एकान्तमा मात्रै सिर्जना गर्न सकिन्छ, हो ?
लेखक : छोरी ! तिमी आज यो कुरा किन सोध्दैछौ ?
सिर्जना : बाबा ! हजुरले लेख्नु भएको ‘क्रमशः द्वन्द्व’ भन्ने उपन्यास मेरा कलेजका सबै साथीहरूले पढेका छन् । उनीहरू सबै मलाई “तेरो ड्याडीले पक्कै पनि त्यो उपन्यासको घटना आफ्नै आँखाले देखेको हेर्नुपर्छ ” भन्छन् । (हाँस्दै) म पनि ढाँट्दै हो भनीदिन्छु । कस्तो गजब है बाबा ? हजुरले कोठाभित्र बसेर पनि त्यस्तो भयानक ठाउँमा पुगेको कल्पनामा मानिसहरू विश्वास गर्छन् । वास्तवमा पाठकहरू चाहि मूर्ख नै हुन् । हैन बाबा ?
लेखक : पाठकलाई जति अलमलमा पार्न सक्यो त्यति नै महान लेखक होइन्छ अचेल । जे होस्, तिमी पनि मेरो लागि एउटा संभावनायुक्त पात्रको रूपमा देखा पर्दैछौ ।
सिर्जना : म ? पात्र ? कस्तो कुरा गर्या ?
लेखक : ( नजिकै रहेको पात्रलाई देखाउँदै) ऊ त्यस्तै ? बुझ्यौ ?
सिर्जना : (सिर्जनाले पात्रलाई देख्न सक्दिनन्) अहँ । मैले त बुझिन । त्यहाँ त पुस्तकको ठेली र र्याक बाहेक केही छैन ।
लेखक : के तिमीले त्यहाँ उभिरहेको मेरो वर्तमान सिर्जनाको मुख्य चरित्रलाई देखिनौं ?
सिर्जना : हैन कस्तो कुरा गर्या ! त्यहाँ त कोही पनि छैन नि । कि कतै मलाई डर देखाएर यो कोठाबाट चा“डै धपाउन खोज्नु भएको त हैन ?
लेखक : हैन, हैन । तिमीले अझै मेरो कुरा बुझिनौं छोरी ! तिमी मेरो भावी सिर्जनाको अर्को एक प्रमुख चरित्र हुन सक्छ्यौ । तिमी भित्र पनि एउटा उत्तरआधुनिक कथा लुकेको छ । धेरैदिनदेखि त्यसलाई विचार गर्दैछु । तिमीसँग बसेर म यसबारेमा छुट्टै कुरा गर्नेछु ।
पात्र १ : अहँ । हुदैन । तैंले एउटा कथाको न्यायसंगत अन्त्य नगरीकन, अर्को कथा आरम्भ गर्न पाउँदैनस् ।
लेखक : तँ बढी बोल्छस् ?
सिर्जना : हैन के भो ड्याडिलाई !
लेखक : ए ! मैले तिमीलाई भनेको होइन । अहिले जाऊ तिमी । म एक्लै केही बेर बस्न चाहन्छु ।
सिर्जना : (अलमलिदै) खै यो बाबालाई पनि बेला बेलामा के हुन्छ ?
लेखक : ल, ल अहिले जाऊ तिमी !
सिर्जना : ( जाँदा जाँदै) तर मेरो शायरी चाहि नबिर्सनु होला नि ।
लेखक : ल, ल हुन्छ ।
सिर्जना बाहिरिएपछि लेखकले हतारहतार ढोका लगाउँछ ।
यत्तिकैमा पात्र १ सँगै पात्र २ र ३ समेत देखा पर्छ ।
लेखक उनीहरूलाई देखेर अन्योलमा पर्छ ।
पात्र १ : पुरा भयो तेरो कुरा ?
लेखक : तँ अझै पनि यही छस् ?
पात्र १ : के ठानिस् तैंले ? के म तँ लाई यत्तिक्कै छाड्नेछु ? यो तेरो भ्रम हो । आज म एक्लो छैन ? मसँग अरू धेरै पात्रहरू गोलबद्ध भएका छन् मेरो अभियानमा ।
लेखक : के भन्न चाहन्छस् तँ ?
पात्र २ : बन्द गर पात्रहरूको मृत्यु? उत्सव मनाउन !
पात्र ३ : बन्द गर पात्रहरूको अधिकार हनन गर्न ।
पात्र २ : यदि यस्तै चाला हो भने पात्रहरूको उत्तेजक भीडमा एउटा निरंकुश लेखक मारिएको समाचार भोलीको अखबारको हेडलाइन बन्न सक्छ ।
पात्र ३ : यदि यस्तै चाला हो भने पात्रहरूको अनियन्त्रित भीडले तँलाई बन्दि बनाएर कठोर मानसिक यातना पनि दिन सक्छ ।
लेखक : को ? को हौ तिमीहरू ? मैले तिमीहरूको के बिगार गरिदिएको छु र ?
पात्र २ : तँ निर्मम हत्यारा होस् । पात्रहरूको मृत्युमा रमाउन खोज्ने तँ कसरी दोषमुक्त हुन सक्छस् ?
लेखक : वाहियात कुरा नगर । मैले तेरो के बिगार गरिदिएको छु र ?
पात्र २ : मलाई गहिरिएर हेर त । मेरो अनुहार ध्यान दिएर पढ् त । म तेरो अघिल्लो उपन्यासको त्यही नायक हुँ । जसलाई तैंले सुरा र सुन्दरीमा लम्पट एउटा विलासी पुरुषको परिचय दिएको थिइस् । तैंले जानाजानी आफ्नो कृतिलाई रोमाञ्चक बनाउनका निम्ति मलाई खलनायक बनाइस् । तर के मभित्र नराम्रो पक्ष मात्र थियो ? तँ परम्परावादीसोचले ग्रत लेखक होस् । तेरो मगजमा जहिले पनि पुरानै र्ढरा र मपाइत्व हावी हुने गरेको छ । मलाई किन अन्यायमा पारिस् ? यसको उत्तर तैंले दिनै पर्छ ।
लेखक : यसमा मेरो के गल्ती छ र ? त्यो उपन्यासमा तेरो भूमिकाको चरित्र नै त्यस्तो खालको थियो । कथाको परिवेश र घटनाक्रमले नै तँ लाई त्यस्तो बनाउन बाध्य पारेपछि मैले त्यसरी कलम नदौर्डाई सुखै थिएन ।
पात्र २ : तर के तैंले मेरो जीवनको भोग, बिलासको घटनालाई मात्र किन समेटिस् ? के तैंले मेरो राम्रो कुराको थोरैमात्र पनि बखान गर्दा तेरो कलमको अपमान हुन्थ्यो ? तैंले यसको जवाफ आज दिनै पर्छ ।
लेखक : ल भयो । यस्तै कुरा गर्छस् भने् म तिमीहरूको प्रश्नको कुनै जवाफ दिन्न ।
पात्र १ : मलाई थाहा थियो, जबसम्म तैंले आफ्रले ती कुराहरू भोग्दैनस् तबसम्म तेरो मगजमा पात्रस्वर कहिल्यै पस्दैन ।
पात्र ३ : मृत्युलाई सहज रूपमा लिइस् तैंले । यो ठिक गरिनस् तैंले ।
त्यसैबेला नेपथ्यमा लेखककी पत्नी भावनाको ढोका खोल्नुस् न छिटो ! ढोका खोल्नुस् नँभन्ने अत्तालिएको स्वर सुनिन्छ ।
लेखक आवाज सुनेर झस्कन्छ ।
नेपथ्यमा भावनाको ढोका खोल्नुस् न छिटो ! ढोका खोल्नुस् नँभन्ने स्वर फेरि सुनिन्छ ।
लेखक : को हँ ? बाहिर को ?
भावना : म सिर्जनाकी ममी ! छिटो ढोका खोल्नुस् नभन्या ।
लेखकले अत्तालिदै ढोका खोल्छ ।
कोठामा भावनाको प्रवेश हुन्छ ।
लेखक : किन ? के भो ? किन यसरी अत्तालिएकी ?
भावना : लौ न । भर्खरै छोरी सिर्जनाको स्कूलबाट फोन आएको थियो । सिर्जनाको स्कूल बस बाटोमा गाडिसँग ठक्कर लागेर पल्टिएछ ।
लेखक : अनि सिर्जना …?
भावना : सिर्जना पनि त्यसै बसमा थिईन् रे ? ठूलै दुर्घटना भएको हो रे । सिर्जनाको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ । छिट्टै हस्पीटल आउनु पर्यो भनेर फोन आएको थियो । लौन अब के गर्ने ?
लेखक : (आफ्नै सुरमा) सिर्जनाको दुर्घटना मा ….? तर यो कसरी हुन सक्छ ? उनले त मसँग बाचा गरेकी थिईन् । भोली मैले उनलाई केही दिनु छ । ….यो सब कसरी हुन सक्छ ?
भावना : (अत्तालिदै) लौ न तपाई पनि तयार हुनुस् । गइहाल्नु पर्छ । म हस्पीटलमा फोन गर्दैगर्छु छिटो तयार हुनोस् है ? लौन के भयो यो ? …
भावना अत्तालिदै प्रस्थान ।
लेखक भुईमा थचक्क बस्छ ।
लेखक : अहँ । यो हुन सक्दैन । मेरी छोरी सिर्जना यसरी मलाई छाडेर जान सक्दिन ।
पात्र २ : घोर आश्चार्य ! तँ त र्सजक ! के तँलाई आफ्नो पात्रको मृत्युले पनि छुन्छ र ?
पात्र १ : (उपहास गर्दै) लेखक ! यसमा त तलाई पटक्कै दुःख नलाग्नु पर्ने हो ?
पात्र ३ : तँ लाई आफ्नो मान्छेको मृत्यु हुँ दा पछुतो लाग्छ भने आफ्नो पात्रको मृत्युमा किन पछुतो लाग्दैन ?
पात्र १ : यही प्रश्नको उत्तर नै तेरो उपन्यासको अन्तिम पृष्टको निचोड हुनु पर्छ बुझिस् ?
पात्रहरू केही कदम पछाडि र्सछन् र क्यानभास पछाडि गएर हराउँछन् ।
लेखक आफ्नो उपन्यासको नजिक पुग्छ ।
एक्कासी उपन्यासको पानाहरू धुजाधुजा पार्छ र भक्कानो छोडेर रुन थाल्छ ।
आलाप बजी नै रहेको हुन्छ । पर्दा खस्छ ।
This entry was posted in नाटक and tagged Krishna Shah 'Yatri'. Bookmark the permalink.